သားသားမီးမီးတို့အတွက် နေချင်စဖွယ်အိပ်ခန်းလေးတွေ တည်ဆောက်တတ်ဖို့
သားသားမီးမီးလေးတွေဆိုတာ အိမ်ရဲ့အမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထား ချစ် ခင်ရတဲ့ ရတနာလေးတွေပါ။ သူတို့လေးတွေ အိမ်မှာရှိနေကြရင် မိသားစုရဲ့ အမောတွေပြေပျောက်သွားစေပါတယ်။ တီတီတာတာ စကားသံလေးနဲ့ ချစ်စဖွယ်အမူအရာလေးတွေက နေအိမ်မှာ အပြုံး၊ အပျော်တွေကို...
ချစ်စရာကောင်းပြီး စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ခြံစည်းရိုးဝင်းလေး ဖန်တီး ပြင်ဆင်တတ်ဖို့….
သင့်အိမ်ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းပြီး ထူးခြားတဲ့ ခြံစည်းရိုး၊ ဝင်းတံခါးလေး တွေကြောင့် အိမ်ရှေ့ကဖြတ်သွားတဲ့လူတိုင်းကို နောက်ပြန်လှည့်မ ကြည့်ရမနေနိုင်အောင်ကို စွဲဆောင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခြံဝင်းလှ လှကလေးနဲ့ လှပပြီးစွဲဆောင်မှုရှိတဲ့...
အခန်းကျဉ်းလေးထဲ ဘယ်လိုမျိုး နေရာထိုင်ခင်းပြင်ဆင်ခင်းကျင်းမလဲ…..
သင့်ရဲ့ နေတဲ့တိုက်ခန်း၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်အခန်းလေးက နေရာကျဉ်း ကျပ်ပြီး သင့်အတွက် စိတ်မသက်သာစရာဖြစ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေပြီ လား။ တစ်ကိုယ်ရည်ပစ္စည်းတွေ ထားသိုနေရာချဖို့နဲ့ ကိုယ့်အတွက် အခင်းအကျင်းပြင်ဆင်ဖို့အတွက် အခန်းကကျဉ်းမြောင်းလွန်းတာ ကြောင့်...
အိမ်ခြံဝင်းလေးကို အလှဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်တီးတတ်ဖို့
အိမ်အတွင်းပိုင်းလှပပြီးပေမယ့် အပြင်ဘက်ကအပြင်အဆင်တွေက သမားရိုးကျထူးမခြားနားပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင် သင့်အိမ်တစ်ခုလုံးရဲ့ အလှတရား က မှေးမှိန်သလို ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် . . .သင့်အိမ်တစ်ခုလုံးကို ပြီးပြည့်စုံအောင် လှပပြီး ခမ်းနားဖို့ဆိုရင် အိမ်တည်ဆောက်...
ချစ်စရာကောင်းပြီး စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ လသာဆောင်ကလေးတွေ ဖန် တီးပြင်ဆင်ကြမယ်….
ညနေခင်းဆည်းဆာနေဝင်ချိန်တွေ၊ ညဘက်အလင်းရောင်ပျောက် တဲ့ အချိန်မျိုးတွေဆိုရင် အိမ်ရှေ့ဝရန်တာ၊ လသာဆောင် လေး တွေမှာ ငြိမ်ငြိမ်ကလေးထိုင်ကာ ကောင်းကင်က လရောင်နဲ့ ကြယ် ပွင့်လေး တွေမော့ကြည့်ပြီးတော့အတွေးစိတ်ကူးလေးတွေယဉ်ပြီး တော့...
သစ်ပင်သေးသေးလေးတွေ စိုက်ပျိုးပြီး အိမ်တွင်းခန်းလေးတွေမှာ အလှဆင်ကြမယ်….
သစ်ပင်လေးတွေ စိုက်ပျိုးရတာ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက် သစ်ပင်လေးတွေလည်း စိုက်ပျိုးရင်း နေအိမ်လေးကိုလည်း အလှ ဆင်ပြင်ဆင်လို့ရနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်း စိတ်ကူးလေးတွေ ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ခြံဝင်းထဲမှာ စိုက်ပျိုးတဲ့အပင်ကြီးကြီးမားမားကြီး တွေမဟုတ်ပဲ...
နေအိမ်ဒီဇိုင်းနဲ့ အိမ်အလှပြင်ဆင်သူ ဒီဇိုင်နာတွေအဖို့ အိမ်ဒီဇိုင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အပြင်အဆင်တွေကို မိသားစုတွေ၊ အမျိုးသမီးတွေ၊ ကလေးငယ်တွေ၊ လူငယ်တွေအတွက် လိုက်ဖက်ပြီး သင့်တော်တဲ့ ဒီဇိုင်းအပြင် အဆင်တွေ ချည်းသာပြင်ဆင်တာများကြပြီး လူလတ် ပိုင်းနဲ့...
နေအိမ်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ကြမ်းခင်းပြင် အခင်းတွေကို ရွေးချယ်တတ် စေဖို့
နေအိမ်တစ်လုံးရဲ့ အဓိကအစိတ်အပိုင်း အိမ်အလုံးအထည်၊ အိမ်အ မိုးအကာအရံတွေအပြင်အဖြစ် အရေးပါတဲ့နောက်ထပ်အရာ တစ်ခု ကတော့ ကြမ်းခင်းပြင်တွေပါပဲ။ ကြမ်းခင်းပြင်တွေက အိမ်တစ်အိမ် လုံးရဲ့ အများဆုံးနဲ့ အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး...
ခြံဝင်းလေးထဲ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပန်းဖြေအိမ်ငယ်ကလေးတွေ တည်ဆောက်တတ်ဖို့….....
ဒီတစ်ခါတော့ ခြံဝင်းကျယ်ကျယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မိသားစုဝင် တွေအတွက် ခြံဝင်လေးထဲမှာ နေချင်စရာကောင်းတဲ့ အပန်းဖြေ စံအိမ်ငယ်လေးတစ်လုံး တည်ဆောက်နိုင်မယ့်စိတ်ကူးကောင်း ကောင်းလေးကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ခြံဝင်းထဲမှာ ခုံလေးတွေ၊ ဒန်းတွဲလေးတွေအပြင်...
အိမ်တစ်အိမ်ကို ရောက်ပြီဆိုရင် အရင်ဆုံးမြင်တွေ့ရမှာက အိမ် အဝင်တံခါးတွေပါပဲ။ အိမ်ရှေ့နေလှမ်းကြည့်လိုက်တာနဲ့ ခမ်းနားပြီး ဆန်းပြားတဲ့ တံခါးပေါက်တွေကြောင့် ဒီအိမ်ကိုသတိထား မိပြီးတော့ အိမ်ကိုစိတ်ဝင်စား နှစ်သက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခမ်းနားတယ်။...